मानसिक स्वास्थ्य Archives - HealthyKhabar
आज देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा नि:शुल्क
काठमाडौँ, २ असोज । आजको दिन सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवा (ओपिडी)को टिकट निशुल्क उपलव्ध पाइने छ। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर निशुल्क ओपिडि सेवा दिन लागेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज आफू अन्तरगर्तका संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बहिरंग सेवा (ओपिडी)को टिकट निशुल्क उपलव्ध गराउने मन्त्रालयका प्रबक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा हर्सोल्लाशपुर्वक मनाउने योजना अनुसार आम सर्वसाधारणलाई आज ओपिडी सेवाका निशुल्क टिकट उपलव्ध गराइएको बताउनुभयो। ‘यो वर्ष सरकारले संविधान दिवसलाई विशेष रुपमा २, ३ र ४ असोज गरी तीन दिन मनाउने निर्णय गरेको छ । सो अवसरमा हरेक मन्त्रालयले एउटा रचनात्मक काम पनि होस भन्ने सरकारको चाहना अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपिडि सेवा नि:शुल्क गरेको हो। सोही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपिडी टिकटको शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो ।
बुटवल, १६ भदौ । पाँच नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७६ को मस्यौदा तयार गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश ५ ले २४ रणनीतिसहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार गरेको हो । उक्त मस्यौदामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सामाजिक बिकास मन्त्रालयले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सेवा पु¥याउने लगायतका २४ रणनीति सहितको स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकरी दिएको छ । प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने गरी प्रदेशले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रमा सफलता हात पारिरहेको दाबी गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्यका सूचकहरुमा भने कमजोर रहेको वताएको छ । त्यही कमजोर अवस्था हटाउन प्रदेश सरकार नीति निर्माणमा जुटेको छ । समाजिक विकास…
सरकारी अस्पतालमै १९ हजार डाक्टर र ६७ हजार नर्स अभाव
काठमाडौं,६ भदौ । देश विकासका लागि नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ । भनिन्छ, स्वस्थ जीवन नै स्वस्थ मस्तिष्कको उपज हो । यस्तो महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र भने वर्षौंदेखि राज्य तहबाट नै उपेक्षित हुँदै आएको छ । यो कुरामा सर्वसाधारणको मात्रै होइन, सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पनि स्वीकारोक्ति रहेको छ । ‘जनतालाई सुलभ सेवा दिन अझै १९ हजार डाक्टरको अभाव छ, ६७ हजार नर्स छैनन्,’ स्वास्थ्य क्षेत्रको पीडा पोख्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ ? ’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवकै अनुभवमा राज्यको उपेक्षाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र बग्रेल्ती समस्याले भरिएको छ र त्यसैको पीडा भोग्न बाध्य छन् सर्वसाधारण । ‘विगतका सबैजसो सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उदासीन रहँदै आए, जसको पीडा आमजनताले भोग्दै आए । अहिले एकैपटक सुधार गर्न कठिन भइरहेको छ, स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधार गर्न म लडिरहेको छु तर पुरातन सोच भएकालाई बदल्न कठिन भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बिहीबार…
चितवन, ५ भदौ । जिल्लामा एचआइभी सङ्क्रमित आमाहरुले सुरक्षित बच्चा जन्माउने क्रम बढ्दो रहेको छ । भरतपुर अस्पतालमा विगत १० वर्षमा ९० जना सङ्क्रमित आमाले बच्चा जन्माएका छन् । तीमध्ये पाँच जना बच्चामा सङ्क्रमण देखिए पनि ८६ जनामा भने सङ्क्रमण भेटिएको छैन । एक जना आमाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी हुन् । भरतपुर अस्पतालमा रहेको एन्टीरेट्रो भाइरल थेरापी (एआरटी) केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष १२ देखि १५ जनाले सुरक्षित बच्चा जन्माउने गरेका छन् । यस्तै सन् २०१९ को ६ महीनामा चार जना आमाले बच्चा जन्माइसकेका छन् । यसै वर्ष चार जना आमा बच्चा जन्माउने तयारीमा रहेका छन् । सङ्क्रमित भएको थाहा भएदेखि नै औषधि सेवन गर्दा औषधिका कारण बच्चामा र श्रीमान् वा श्रीमतीमा समेत समस्या नहुने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाले जानकारी दिए । सन् २००७ मा केन्द्र स्थापना भएको हो । सङ्क्रमित आमाले नियमित औषधि खाएमा उनीहरुबाट जन्मिएको बच्चामा समस्या नदेखिने गरेको उनले जानकारी दिए । बच्चा बसिसकेपछि एचआइभी सङ्क्रमण देखिएका पाँच…
मानसिक बिरामी युवतीको पेटबाट डेढ किलो सुनका गहना र सिक्का निकालियो
भारतको पश्चिम बंगाल राज्यस्थित बीरभूम जिल्लाको एक सरकारी अस्पतालमा मानसिक बिमारी एक युवतीको पेटबाट एक किलो ५०० ग्राम भन्दा धेरै गहना र सिक्का निकालिएको छ । रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कलेजका सर्जरी विभाग प्रमुख सिद्धार्थ बिस्वासका अनुसार २६ वर्षीया महिलाको पेटमा ५ रुपियाँ र १० रुपियाँ ९० वटा सिक्का, सिक्री, नाकको बुलाकी, फुली, झुम्का, चुरा, पाउजु, र घडी भेटिएको हो । डाक्टरका अनुसार यवतीको पेटबाट ६९ वटा सिक्री, ८० वटा कानका मुन्द्री र ९० वटा सिक्क पेटबाट निकालेका हुन्। बिस्वासले बुधवार सर्जरीपछि भने, गहना धेरै जसो तामा र पित्तलका थिए। यिनमा केही सुनका पनि गहना भेटिए। युवतीकी आमाले घरबाट गहना गायब भइरहँदा आफूले छोरीलाई सोधेको बताइन् । तर आफूले गहना हराएकोबारेमा सोध्दा छोरीले रुँदै टार्ने गरेको उल्लेख गरिन्। आमाका अनुसार छोरी मानसिकरुपमा विरामी थिए। मेरी छोरी मानसिक रूपमा अस्वस्थ छिन्। पछिल्ला केही दिनदेखि उनले हरेक पटक खाना खाँदा बान्ता गरिरहेकी थिइन्। ती महिलाका अनुसार भाइको दोकानबाट ल्याएका सबै सिक्का छोरीले निलेकी…
युवतीमाथि बलात्कार , घाईते अवस्थामा उद्धार
मोरङ,२३असार। मोरङमा एक युवती बलात्कारको शिकार भएकीछिन् । उर्लाबारी नगरपालिका १ मेचेडाँडाकी एक युवतीलाई बलात्कृत भएपछि घाईते अवस्थामा स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरेका हुन् । घटनालगत्तै आरोपितलाई पनि प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ । प्रक्राउ पर्नेमा २१ बर्षीय संगम राई रहेका छन् । पीडित युवती र राईबीच केही समययता फेसबुकबाट चिनजान भएका थिए । फेसबुकबाटै राईले युवतीसंग संगत बढाईरहेको प्रहरीले जनाएको छ। संगत बढिरहँदा दुबैबीच मोबाईल नम्बर साटासाट समेत भएको थियो । मोबाईल नम्बरकै आधारमा पिछा गर्दै आएका राईले खेतबाट काम गरेर घर फर्कदै गरेकी २१ बर्षीय युवतीमाथि शुक्रबार राति ९ बजे बलात्कार गरेका थिए । इलामको चुलाचुली ६ घर भएका राई मोरङ उर्लाबारीमै आफन्तको घरमा बस्दै आएका थिए । घाईते अवस्थामा भेटिएकी युवतीको स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगेका थिए । युवतीको टाउको र शरिरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा ठुलै संघर्ष भएको र प्रतिवाद गरिएको देखिएको…
स्वास्थ्यप्रति व्यक्ति,परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाइने,अब सबै स्थानीय तहमा अस्पताल
काठमाडौँ, असार १७ गते । स्वास्थ्यप्रति व्यक्ति, परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने मूल लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्र स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीतिअनुसार अब हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल हुने छ । उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भइरहेको भन्दै अब तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको विस्तृत विवरण तयार गरिने र त्यसले नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने बताउनुभयो । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले ‘स्वस्थ तथा सुखी जीवन लक्षित सजग र सचेत नागरिक’ सोचलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । औषधिको कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत…
नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं,असार १६। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज दिउँसो नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्न लागेको छ। गत महिना मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको स्वास्थ्य नीति मन्त्रालयले दिउँसो २ बजे सार्वजनिक गर्दै छ। गत महिना जेठ १० गते मन्त्रीपरिषदले पास गरेको स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही दिन अघि मात्र आएको थियो । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। संघीयता लागू भएपछि स्वास्थ्यको संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य नीति बनाइएको छ। नीतिमा आयुर्वेदक,होमियोप्याथी, स्वास्थ्य पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
सेना प्रमुखको गोली हानी हत्या
इथियोपिया,८ असार ।इथियोपियाका प्रधान सेनापतिको गोली हानी हत्या भएको छ । इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त जानकारि दिए। अहमदले अम्हारा राज्यमा भएको असफल सैनिक सत्ता विद्रोहलाई भने सरकारले बिफल बनाएको जानकारी दिए । सैनिक पोशाकमा टेलिभिजनसामु देखिएका प्रधानमन्त्री अहमदले सेनापति सियर मेकोनेनको उनकै अंगरक्षकले गोली हानी हत्या गरेको जानकारी दिए । उक्त गोलीकाण्डमा अम्हारा राज्यका अध्यक्ष अम्बाचे मेकोन्नेन र अरु केही उच्च अधिकारीहरुको हत्या भएको छ । अम्हाराका सुरक्षा प्रमुखको नेतृत्वमा सैन्य विद्रोह भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । सैनिक विद्रोह भएका कारण इथियोपियाको इन्टरनेट सेवा देशैभर बन्द गरिएको छ । घटनाको विस्तृत विवरण अझै प्राप्त भइसकेको छैन । संयुक्तराज्य अमेरिकाको दूतावासले राजधानी आदिस अबाबाका विभिन्न भागमा गोली चलेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि इथियोपियाको दोस्रो ठूलो शहर अम्हारामा सैनिक विद्रोह भएको घोषणा गरेको थियो । मुलुकका नौ वटा स्वायत्त क्षेत्रमध्ये अम्हारा दोस्रो ठूलो रहनुका साथै यसको सीमा सुडानसँग जोडिएको छ ।…
संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधि पाउन कठिन
काठमाडौं ६ असार । ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरुको प्रयासमा नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ । संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे नगरेको विषयमा केन्द्रीकृत रहेको वर्ष पुस्तक शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको हो । राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मातृ सेवा, राज्यले दिने उपचार खर्चलगायतमा सवैले न्यायोचित रुपमा स्वास्थ्य अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको निचोडलाई पुस्तकमा समेटिएको छ । २०७५ सालभरीमा देशभरीमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिएको उपचार सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ५९ जिल्लामा अध्ययन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले बताए । वर्षेनी स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले वर्ष २०७५ मा गरेको अध्ययनले निःशुल्क औषधी उपलव्ध नभएको देखाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरु केही समय मात्र खुल्ने, स्वास्थ्यकर्मी उपलव्ध नहुने, जेष्ठ नागरिकको लागि विशिष्ट…
युक्रेनको मानसिक अस्पतालमा आगलागी हुँदा ६ जनाको निधन
युक्रेन २८ जेठ ।युक्रेनको ओडेसा शहरमा मानसिक रोगीहरुको उपचार गर्ने एक अस्पतालमा भएको आगलागीमा परी छ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन् । एक तले यस भवनमा सोमबार साँझ आगलागी भएको आकस्मिक सेवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगलागीको कारण भने पत्ता लागेको छैन । यस आगलागीमा परी छ जनाको मृत्यु हुनका साथै घाइते भएका अन्य चार जनालाई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस आगलागीमा नौ जनाले भने भागेर ज्यान बचाएका थिए । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले यो अति नै दुःखान्त घटना भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री भोलोदिमर ग्रोएस्म्यानलाई यस घटनाको तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । युक्रेनमा आगलागीका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । रासस /एएफपी
काठमाडौं मेडिकल कलेजमा एमविविएस अध्ययनरत विद्यार्थी मृत फेला
काठमाडौं,२५जेठ । सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्र (एमबीबीएस) चौंथो वर्षमा अध्ययनरत शिशिर खनाल मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। गत जेठ १७ गतेदेखि हराएका खनाल शनिबार अपरान्ह कीर्तिपुरको जंगलमा मृत फेला परेका हुन्। अर्घाखाँची घर भएर कोटेश्वरमा बसी पढ्दै आएका खनालको खोजीमा जुटेको प्रहरीले उनको मोटरसाइकल कीर्तिपुरस्थित पुष्पलाल पार्कमा फेला पारेको थियो। मोटरसाइकल भेटिए पनि उनी बेपत्ता थिए। महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट मृत भेटिएका खनालले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरेको छ। खनालका परिवारले प्रहरीलाई जानकारी दिएअनुसार उनी डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दै आएका थिए। दुईवटा मोबाइल बोकेपनि खनालको फोन स्विच अफ देखिएपछि आफन्तले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खनालले आफू बेपत्ता हुनुअघी आफ्नो फेसबुक आइडि पनि बन्द गरेका थिए। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ।
मानसिक रोग पनि अपराधको कारण
काठमाडौँ, १८जेठ ।भोजपुरमा दुईवर्षको सन्तानलाई ‘रोएर दुःख दिएको निहुँ’ मा आमाले धारिलो हतियार प्रयोग गरी गर्धन छिनाएको घटनाले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम भोजपुर बजार पानीट्याङ्की बस्दै आएकी २५ वर्षीय सम्झना थापाले छोरा सम्बोधनको मङ्गलबार बिहान हत्या गरेको प्रहरीसँंगको वयानमा स्वीकारेकी हुन् । दुःख गरी जन्माएको र हुर्काएको सन्तानलाई यति निर्ममढङ्गले हत्या गर्नुमा डिप्रेसन (मानसिक रोग) मुख्य समस्या देखिएको छ । आफन्तहरूका अनुसार, अभियुक्त सम्झनालाई डिप्रेसन भएको थियो । ललितपुरको गोदामचौर इँटाभट्टामा मजदुरी गर्दै आएका ४२ वर्षीय जयबहादुर वाइवा गत वैशाख १० गते ४१ वर्षीय श्रीमती मनमायाको गर्धन छिनाएर टाउको बोकेर सडकमा हिँडिरहेको अवस्थामा भेटिए । ‘बारम्बार किचकिच, आज त टाउको छिनाए’ भनेर बर्बराउँदै हिँडिरहेका वाइवालाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । यस्ता त्रूmर हत्या हुनुमा ‘डिप्रेसन’ प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । त्यस्तै, पाँचथरको मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेमा जेठ ७ गते राति ७५ वर्षीय बमबहादुर फियाक र उहाँका ज्वाइँ धनराज शेर्माको परिवारका नौ सदस्यहरूको बीभत्स हत्या घटनाले…
९० लाख नेपालीले धूम्रपान गर्छन् ,४७ अर्व ३० करोड धूम्रपानजन्य रोगको उपचारमा खर्चन्छन्
काठमाडौं, १६ जेठ । ‘सुर्तिजन्य पदार्थ वा फोक्सोको स्वास्थ्य’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार विश्व धुमपान रहित दिवस मनाउन लागिएको छ। हरेक ३१ मे का दिन विश्व धूम्रपान रहित दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व धूम्रपान रहित दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेपाल जनस्वास्थ्य संघ केन्द्रिय कार्यसमिति र प्रदेश नम्बर ३ को स्वास्थ्य निर्देशनालयले बिहिवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थ र यसको सेवनले हुने असरबारे जानकारी गराइएको थियो। भविष्यमा सुर्तीको रोकथामको बारेमा सुसुचित गर्ने उद्देश्यले मिडियासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। विश्व सुर्तिजन्य पदार्थ रहित दिवस, ३१ मे २०१९ को पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त रुपमा अन्तरक्रियाको आयोजना गरि सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनका रोकथामको बारेमा सरोकारवाला र पत्रकारहरुबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, उनले गर्भवती र १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरुले सुर्तिजन्य पदार्थ खरिद तथा विक्रि गर्न नपाउने कानूनी प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने धारणा…
हेर्नुृहोस स्वास्थ्य क्षेत्रको पुरा बजेट बक्तव्य
काठमाडौं,१५ जेठ । विकासको साध्य र साधन दुवै नागरिक नै भएकोले सवै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइनेछ। - सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। बीवितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चत गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ। मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न रु ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु। - महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक…